सानो उमेरमै यौन साथी बनाउनाले यौन रोगको शिकार हुन्छन् किशोरी– डा. सिर्जना शर्मा « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
सानो उमेरमै यौन साथी बनाउनाले यौन रोगको शिकार हुन्छन् किशोरी– डा. सिर्जना शर्मा
पछिल्लो समयमा किशोर किशोरीहरुमा आफ््नो शरिरमा आएको शारीरि परिवर्तनले मानसिक बिचलन आउने गरेका छन् । जब किशोर तथा किशोरी १२ बर्ष भन्दा माथि लागे पछि उसको/उनको शारिरिक रुपमा परिपक्क हुदै जान्छ । शारिरिक रुपमा परिपक्कता आउनेक्रममा शरिरका अंगहरु पनि बिकसित हुदै जान्छन् । अझ किशोरीहरुमा आउने परिवर्तनले किशोरीहरुलाई मानसिक बिचलन आउने गरेको पाईन्छ । उमेर बढेसंगै महिनावारी समस्या तथा यौन र प्रजनन् समस्याहरु बिशेषत किशोरीहरुको यौवन अवस्थामा बढी आउने गर्छ । यस्तो प्रकारको समस्याबाट आफू गुज्रिरहदा पनि अरुलाई नभन्ने वा आफ्नो शरिरमा के परिवर्तन भईरहेको छ भन्ने कुरामा अनबिज्ञ भएर मानसिक बिचलन आउने जस्ता समस्या हुन्छ । अझ पछिल्लो समयमा सानै उमेरमा यौन सम्पर्क गर्ने, यौन साथी बनाउने गर्नाले पनि यौनजन्य रोगबाट ग्रसित हुन सक्छन्, किशोर किशोरीहरु । यो अंकमा हामीले यहि किशोरीका यौन, महिनावारी र सामाजिक समस्यालाई लिएर स्त्री तथा प्रसुती रोग बिशेषज्ञ डा. सिर्जना शर्मासंग कुराकानी गरेका छौं । डा. शर्मा पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र ए एण्ड बी इन्टरनेशनल हस्पिटलमा आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँसंग किशोरीहरुको बिबिध समस्याको बिषयलाई लिएर गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
बिशेषत हजुर महिलाको डाक्टर, आजका दिन सम्म हजारौं आमा, दिदीबहिनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिइसक्नु भएको छ । पछिल्लो समयमा युवा किशोरीहरुमा देखिएको स्वास्थ्य समस्या के–के हुन् ?
पछिल्लो जेनेरेशन पढे लेखेको जेनेरेशन छ । पक्कै पनि पढेलेखेको कारणले आफ्नो समस्या खुलेर भन्न थालेका छन् तर पनि किशोरीहरुमा बिबिध प्रकारका समस्याहरु आउन थालेका छन् । अझ यसरी भनौं हामी बिकसित भयौं बिकाससंगै हामीमा समस्याहरु पनि देखा पर्छन् । उदाहरणको लागि हामीले पहिले पहिले यौन रोगका बारेमा कमै मात्रामा सुन्थ्यौं तर अहिले यो यौन रोग बढी मात्रामा सुनिन्छ । यसको अर्थ हामीले यौनलाई बढी नै प्रयोग र अशुरक्षित गर्दै आएका छौं । पछिल्ले समयमा किशोरीमा देखिएको समस्या भनेको महिनावारी एउटा हो भने अर्को यौन रोग हो । सानै उमेरमा यौनसम्पर्क गर्ने त्यो पनि असुरक्षित अनि यौन साथी बनाउने कारण नै यौन रोगको शिकार हुनु हो ।
तपाईसंग लामो अनुभव छ, के लाउछ यस्तो प्रचलन शहरी क्षेत्रमा पनि छ ?
पहिलो पहिले लुकाउने चलन थियो । कुनै पनि रोग लाग्यो भने अरुले थाहा पाउँछ की भनेर भन्न डराउँथे । अझै पनि घरगाउँमा यस्तो प्रकारको बानी बाँकी नै छ तर शहरी क्षेत्रमा भने महिलाहरु जागरुक भएका छन् । सचेत छन् । पत्रपत्रीका, अनलाईन, टिभी, रेडियोको प्रभावले पनि यौन र महिला स्वास्थ्यका बारेमा उनीहरुले थोरधेर भएनि बुझेका छन् । यो बेलामा समस्या भयो भने खुलेर आउन थालेका छन् । सायद उमेर संगै बढेर आउने परिवर्तनले पनि उनीहरु समस्याको समाधानमा लाएका होलान् । यसरी हेर्दा यो क्षेत्रका किशोरीहरु खुलेर आउन थालको छन् ।
किशोरीहरुकै स्वास्थ्य समस्याको बारेमा कुरा गरौं, जब महिलाहरु या भनौं स्कुल पढ्ने उमेरको किशोरीमा महिनावारी सुरु हुन्छ त्यो बला उनीहरुले आफूलाई अझ शारिरीक रुपमा परिपक्क भएको ठान्छन् तर महिनावारीको कारण पेट दुख्ने, पेट दुखाईले स्कुल, कलेज, अफीस वा कुनै काम गर्न नसक्ने हुन्छन्, के हो यो समस्या ?
महिनावारीको बेला पेट दुख्नु सामान्य हो । नर्मल रुपको दुखाईलाई आत्तिन पर्ने अवस्था हुदैन । अब कहि कतै हलचल गर्न नै नमिल्ने गरी दुखेको छ, बढी मात्रामा रगत बगेको छ भने त्यो कारण महिनावारीको मात्र नहुन सक्छ । पाठेघरमा संक्रमण भयो वा कुनै कारण चोटपटक लाग्यो भने पनि बढी रगत बग्न सक्छ, महिनावारीमा पेट बढी दुख्न सक्छ । बढी नै दुख्यो भने काममा जान नै सकेन भने त्यसको कारण खोज्नु पर्छ ।
कोही किशोरी पहिलो पटक वा सानै उमेरमा महिनावारी भईरहेकी छन्, उनलाई खासै के गर्न पर्छ भन्ने ज्ञान छैन । घरमा भएको दिदी आमाहरु जो महिला अभिभावकहरु छन् उनीहरुले सल्लाह र रेखदेख गर्न पर्छ । यो अवस्थामा त्यी आमा दिदीहरुलाई तपाई स्त्री तथा प्रसुती रोग बिशेषज्ञको नाताले के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त के बुझ्न प¥यो भने यो महिनावारी कुनै अछुत रोग होईन् । यो प्राकृतिक प्रकृया हो भनेर अभिभावकले लिनु प¥यो । यो अवस्थामा महिनावारी हुने किशोरीलाई शक्तिको खाँचो हुन्छ । आफूसँगै राखेर पोषिलो खानेकुरा खुलाउन सल्लाह दिन्छु । अझ झोलिलो गेडागुडीको रस बढी प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । अर्को कुरा आईजिङको कुरा आउँछ । सरसफाईलाई बिशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यदी सरसफाईमा हेलचक्राइँ गरियो भने पाठेघरमा संक्रमण हुन सक्छ । दुखाईको समस्या पनि हुन सक्छ । बढी नै दुख्यो भने चिकित्सकसंग सल्लाह गर्दा राम्रो नर्मल दुखाई छ भने तातो पानीले सेक्दा पनि हुन्छ । तर गह्रौं काम नगरी आरामसँग राख्नुहोला भन्ने सल्लाह दिन्छु ।
संक्रमणको कुरा गरिहाल्नु भो, महिनावारी भएको बेला प्रयोगमा आउने वा लगाएका भित्री बस्त्रहरुलाई कति कति समयमा चेन्ज गर्नु पर्ला ?
मैले अघि नै भनेनी, सरसफाई मेन हो । सरसफाईलाई ध्यान दिईएन भए एक त हामी दुर्गन्धित हुन्छौं अर्को पाठेघरमा संक्रमण आउँछ । अझ पनि घरमा छुवाछुत बाँकी रहेकाले किशोरीहरुले नभन्ने गरेका पनि छन् कारण भन्यो भने छुवाछुत छ, बाहिर बस्नुपर्छ त्यसकारण उनीहरुले सरसफाईमा पनि खासै ध्यान दिदैनन् । यदी महिनावारी भएको छ भने पनि कपडा लुकाएर सुकाउने, घाममा पसिन नसुकाउने, जहा पायो त्यही सुकाउने गरेको पाईन्छ यसले संक्रमण बढाउने खतरा प्रबल हुन्छ । हार्यजिङको कुरामा ध्यान दिन प¥यो, रेगुरल भित्री बस्त्रहरु्, अण्डरवयरहरु फेर्न पर्यो, घाममा कपडा राम्रोसंग धोएर सुकाउन सकियो भने संक्रमणबाट बचिन्छ ।
तपाईसंग महिला स्वस्थ्यको बारेमा लामो अनुभव छ, महिनावारी भएको बेलामा के प्रयोग गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ, घरमै पाईने कपडा कि बाहिर किन्न पाईने प्याड ?
त्यो त कण्डिसन हेरेर हुन्छ । कपडा पनि राम्रो नै हुन्छ । यसलाई सफासँग धोएर घाममा सुकाउर समय समयमा फेर्न सकियो भने तर पछिल्लो पुस्ताले भनौं या अहिले धेरैजस्तोले प्याड नै सजिलो लागेको बताउँछन् । कपडा भयो भने धुन पर्ने, सुकाउन पर्ने र अफिस तथा घरबाहिर जान पर्नेहरुका लागि त कपडा अल्लि झनझटिलो हुन्छ । म प्याड नै प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छु ।
अझै पनि गाउंमा महिनावारी भएपछि प्रयोगमा आउने कपडा अझ भनौं भित्री बस्त्र देख्ने ठाउँमा सुकाउन मान्दैनन् । यो समयमा सबैलाई सचेत बनाउन र ओपनली शेयर गर्ने बाताबरण कसरी बनाउन सकिन्छ ?
स्कुल लेबलमै स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गरिएको छ । अझ हाम्रो आमाबुबाले नै हामीलाई पहिले देखिनै यस्तो संस्कार सिकाउनु भएको छ कि महिनावारी भएको बेला प्रयोगमा आउने कपडाहरु दाजु भाई तथा बुबाहरुले देख्ने ठाउँमा सुकाउनु हुदैन । यहि चलन हामीले भोग्दै र सुन्दै पनि आएका छौं । यस्तो प्रकारको संस्कारले गर्दा पनि कतिपय किशोरीहरु बाध्य भएका छन् । यो संस्कार हटाउदै अब सबै सजग र आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यसमा स्वास्थ्यको बिषय बढी जोडिन्छ । सबैभन्दा बढी यो सावामा घरकै दाजु भाई बुबाहरु नै सचेत हुन जरुरी ठान्छु । आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्दै यो परम्परा अन्य गर्न र खुलेर कुरा गर्न समेत म आग्रह गर्छु ।
युवा अवस्थामा हुने परिवर्तनले किशोर तथा किशोरीहरुमा मानसिक बिचलन आउने गरेका समेत छन् । यो अवस्थामा बिचलन नआउनको लागी स्कुलले कस्तो खालको कार्यक्रम अघि सार्न पर्ला ?
अहिले स्कुलको तल्लो कक्षाबाट नै स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गरिदै आएको छ । तर स्कुलको हेल्थ एजु्केशनले मात्र पुग्दैन । युवा अवस्थामा हुने परिवर्तनलाई सामान्य रुपमा लिन पर्छ । स्कूल स्तरबाट पनि बिभिन्न कार्यक्रमहरु राखेर ज्ञानहरु दिन सकिन्छ । उदाहरणको लागि अभिभावक दिवस, कुनै तालिम तथा गोष्ठी, बार्षिक कार्यक्रमहरुमा बिद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्य ज्ञान दिन सकिन्छ ।
स्कुल स्तरमा पनि हेल्थ पढाउने बेलामा शिक्षकले पनि यौन प्रजनन तथा यौन अंगहरुको शिक्षण बिषयमा बिद्यार्थीहरुलाई नपढाएको, शिक्षक आफै लाज मानेको र बिद्यार्थीहरुले आफै पढ्दा नबुझेको गुनासो आउँछन् । त्यस्तो शिक्षक जो त्यस्तो च्याप्टर नै पढाउन चाहदैन त्यस्तालाई तपाई के भन्नु हुन्छ ?
त्यसो गर्नु भयो भने त हेल्थ सब्जेक्ट राख्नुको के अर्थ ? शिक्षक भनेको कुनै बिषयमा पोख्त भएको मान्छे हो । उसले नै बिद्यार्थीलाई सिकाउन चाहदैन, आफै लाग मान्छ भने त्यसले पाठ्यक्रमा त असर गर्छ नै त्यो भन्दा बढी बिद्यार्थीको स्वास्थ्यमा असर गर्छ किनकी हेल्थ बिषय नै पूर्ण स्वास्थ्य बिषयमा केन्द्रीत हुन्छ । मेरै ब्यक्तिगत अनुभव गर्नुहुन्छ भने, हामी कलेज पढ्ने बेलामा रिप्रोडक्टिभ अर्गान बनाउने बेलामा लाज मानेको छु । मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान बनाउने बेला केटाहरु निहुरीने र फिमेलको बनाउने बेला हामी निहुरीने गथ्यौं । यस्तो अवस्था थियो त्यो बेला अब समयको परिवर्तनले पनि यो अवस्था आउदैन , आउनु पनि हुदैन । टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, आलाईन तथा अन्य माध्यमबाट किशोर किशोरीले सिकेका छन्, बुझेका छन् । म शिक्षकहरुलाई पनि के आग्रह गर्छु भन्दा लाज नमानि बिद्यार्थीहरुलाई खुलेर सिकाउनुहोस् भन्न चाहन्छु ।
महिला सम्बन्धी कुनै समस्या भयो भने तपाईलाई कहा र कतिबेला भेट्न सकिन्छ ?
म पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत छु, तपाईले दिउँसोको समयमा उक्त अस्पतालमा भेट्न सकिन्छ भने अरु समय ए एण्ड बी इन्टरनेशनल हस्पिटल सराङ्कोट जाने बाटो बिन्ध्यबासिनीमा भेट्न सक्नु हुन्छ । कुनै पनि महिला समस्याको लागि म सेवामा तप्पर छु जुन अस्पतालमा हजुरहरुलाइ पाएक पर्छ त्यहि आउनुहुन अनुरोध छ ।
अन्त्यमा, अनलाईन हेर्ने महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त मलाई स्वास्थ्य समस्या र समाधानको बारेमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यबाट । हामी सबैआफ्नो स्वास्थ्यमा सचेत बनौं, संभव भएसम्म रोग लाग्न नदिऔं । रोग लाग्यो भने पनि बिशेषज्ञ चिकित्सक संग परामर्श गरेर मात्र औषधी सेवन गरौं भन्दै सबैको सु–स्वास्थ्यको कामना गर्दछु ।
प्रस्तुती ः ऋषि खतिवडा
परदेशमा भए पनि बुवा आमा मेरो गीत सुनेपछि छोरा घरमै भए जस्तो लाग्छ भन्नु हुन्छ ( अन्तरवार्ता )
बुवा नरनाथ सिग्देल र आमा चिनमाया सिग्देलका कोखबाट वि.स. २०४७ साल माघ २ गते तनहुँको
कोरियामा हानपास रेमिटान्स कम्पनीले बिना धितो १ करोड वन ऋण दिने
द.कोरियामा हानपास रेमिटान्स कम्पनीले कोरियामा रहेका नेपाली मजदुर जो E9 भिसामा कार्यरत छ्न उनिहरुको लागि
पत्रकार थापाले सोधे ‘मन्त्री ज्यू एयरपोर्ट कहिले सुधार हुन्छ ? पर्यटनमन्त्री अधिकारीले दिए यस्तो जवाफ
पत्रकार सुर्य थापा धावन मार्गमा आएको समस्याका कारण आफ्नो उडान कुरेर काठमाण्डौको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
४० लाख रुपैयाँ ठगीको आरोपमा नायिका सुरविन पक्राउ
काठमाडौं । भारतीय प्रहरीले ठगी गरेको आरोपमा नायिका सुरविन चावलाई पक्राउ गरेको छ । पञ्जाबको